XARAASH: Barcelona Oo Xaraashaysa 12 Ka Mid Ah Xiddigaheeda Iyo Magacyada Laacibiinta Waaweyn Ee Ku Jira - Gool24.Net
XARAASH: Barcelona Oo Xaraashaysa 12 Ka Mid Ah Xiddigaheeda Iyo Magacyada Laacibiinta Waaweyn Ee Ku Jira
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa isbeddel weyn ku samaynaysa safkeeda, waxaanay oodda ka qaadaysaa laacibiin tiro badan oo ay kusoo beddeli doonto ciyaartooyo kale oo la jaan-qaadi kara hannaankeeda ciyaareed, firfircoonina gelin kara safkeeda xili ciyaareedka dambe.
Barcelona oo xili ciyaareed qalbi jab ah qaadatay sannadkan, faro madhanna ka taagan dhamaan tartamada marka laga reebo Champions League oo ay wali kusii jiraan, rajo na ka qabaan inay hanan karaan, waxa la sheegay inay go’aan ka gaadhay mustaqbalka 12 ka mid ah ciyaartoygeeda oo ay iibin doonto.
Tababare Quique Setien ayaa isaguna noqon doona qofka 13aad ee kooxda laga diri doono marka uu dhamaado xili ciyaareedka gaar ahaan kulamada Champions League, iyadoo ay Barcelona ku hawlan tahay sidii ay macallinkii beddeli lahaa, waxaana miiska saaran Xavi Hernandez iyo Laurent Blanc, halka ay jiraan tababareyaal kale oo la hadal hayo.
Sida uu qoray wargeyska Marca, ciyaartoyda kooxda laga dirayo waxa beddeli doona laacibiin kale oo ay ka mid yihiin Lautaro Martinez iyo xiddigo kale oo ka ciyaara horyaallada waaweyn ee Yurub.
Waxa kale oo ay kooxdu dib usoo celin doontaa dhawr ciyaartoy oo amaah kaga maqan.
Ciyaartoyda la iibinayo waxa hoggaaminaya xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho, laakiin waxa si lama filaan ah ugu soo baxay Nelson Semedo oo muhiim u ah kooxda, isla markaana dhinaca midig ee difaaca si fiican shaqadiisa uga guta marka uu maqan yahay Sergi Roberto. Waxa kale oo ku jira Junior Firpo oo ah beddelka Jordi Alba.
Martin Braithwaite oo ay Barcelona soo iibsatay bishii February, Ousmane Dembele, Arturo Vidal iyo Ivan Rakitic ayaa iyaguna qayb ka ah.
Magacyada ciyaartoyda ay Barcelona iibinayso oo dhamaystiran:
Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele iyo Martin Braithwaite. Waxa kale oo liiskan ku jira laacibiinta amaahda kasoo laabanaya ee kala ah: Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo iyo Philippe Coutinho.